EMUI 10: Mara ozi niile nke oyi akwa na-ahazi | Gam akporosis
Edere Ferreno | | Huawei, ROM
Izu ole na ole gara aga ọ kwadoro na Huawei na-ahazi a mmepe ogbako na mbido August. N'ime ya, ndị na-emepụta China Aga m ewetara EMUI 10 eze, ya ọhụrụ customization oyi akwa nke dabeere na gam akporo Q. Izu ndị a gara aga nkọwa banyere ya anọwo na-eri eri, nke mere ka anyị nwee echiche nke ihe ga-eme.
Ma n'ikpeazụ, ụbọchị ahụ eruwo. EMUI 10 egosila ọkwa eze, nke mere na anyị maara ozi ọma na ụdị ọhụrụ nke Huawei na-edozi oyi akwa ga-ahapụ anyị. Companylọ ọrụ ahụ ewepụtala ha niile na ọgbakọ ndị mepụtara ya.
1 Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na EMUI 10
2 Ihe ngosi ohuru na EMUI 10
Ọnọdụ gbara ọchịchịrị na EMUI 10
Dị ka ọ ga-eme na gam akporo Q, Anyị na-ahụ ọnọdụ gbara ọchịchịrị na EMUI 10. Akara ndị China na-ekwuwapụta na a webatara atụmatụ a site na mba, nke mere na usoro na ngwa ngwa were ụda ojii a. Na mgbakwunye, ha kwadoro na ngwa ndị ọzọ na-enwetakwa ọnọdụ ọchịchịrị a. Ha ga-agba ọchịchịrị n'ụzọ dị mma.
Na ọnọdụ gbara ọchịchịrị a, akara ahụ chọrọ inye nlebara anya pụrụ iche na ihe niile enwere ike ịgụ. Ha na-ekwu na ọ bụ ihe e lebara anya pụrụ iche. Nke mere na interface anọgide ogugu na mfe iji mgbe niile na a ọchịchịrị mode.
A interface ọhụrụ na ụdị ọhụrụ a nke oyi akwa nhazi. Ọ bụ ezie na anyị enwebeghị ike ịhụ ihe ọ bụla gbasara ya. O yiri ka ha na-ịkụ nzọ na interface na igodo na mpaghara ala nke mpio ahụ. Na mgbakwunye, na EMUI 10 anyị ga-ahụkwa mkpụrụ akwụkwọ buru ibu, ahịrị dị mfe yana mmegharị ọhụụ. Ihe ngosi ohuru a gha adi ike ma dikwa nma na nke a.
Gam akporo Auto na - enwetazi ụdị nke ya na EMUI 10. Ngwongwo nkeonwe nke Huawei na-ewebata HiCar, nke ga - enyere gị aka ijikọ ekwentị na ụgbọ ala mgbe niile. Site n'ime nke a, ị ga-enweta usoro ọrụ, dịka ịhazigharị egwu ị na-ege, ịnyagharị ụgbọ ala n'oge ma ọ bụ inwe ike ịgbanye ntụ oyi tupu ị banye, n'etiti ọrụ ndị ọzọ.
Akụkụ ọzọ dị mkpa n'okwu a bụ Njikọ ma ọ bụ njikọta na ngwaọrụ ndị ọzọ. Emere EMUI 10 n'ụzọ dị ka ụzọ iji kwado usoro okike nke Huawei. Ebe ọ bụ na enwere ike ijikọ ekwentị na ụzọ dị mfe yana ngwaọrụ dịka drones ma ọ bụ ọkà okwu nwere ama. Njikọ na kọmputa na-mma.
N'ezie, na nke a bụ ebe anyị na-ahụ ọtụtụ ndozi site n'aka onye nrụpụta. Otu n'ime ọrụ kpakpando bụ njikọta kachasị mma ekele na ntanye ikuku na kọmputa. Nke a ga - enyere gị aka ịdọrọ faịlụ gaa na ntanetị nke ekwentị. Ka anyị nwee ike i copyomi faịlụ n'etiti ngwaọrụ abụọ ahụ, n'akụkụ abụọ.
Amamịghe echiche na-aga n'ihu na-anọ na EMUI 10. N'okwu a, akara ndị China na-eji ya enyocha ọdịnaya nke fndị ọzọ gosipụtara na mkpọchi mkpọchi. N'ụzọ dị otú a, ederede ederede nke a ga-egosipụta na ihuenyo ga-etinye ya n'ụzọ na-adịghị ekpuchi ọdịnaya ahụ. Nke na-enye gị ohere iji ihuenyo dị mma karịa. Ọ na-ewere na ederede nwere ike ịgbanwe ọnọdụ dabere na foto na ihuenyo mkpọchi.
Mgbe niile na ọnọdụ Ngosipụta emelitere na EMUI 10 na nke a, maka ekwentị ndị China nwere ihu OLED. Ọnọdụ a na-enye ọtụtụ ihe onyonyo ọhụụ, kachasị agba, nke iji chọọ ekwentị mma mgbe anyị anaghị eji ya. A na-enyekwa usoro elekere ọhụụ, yana ihe ịchọ mma ọhụụ na nke a.
Huawei ekwuputala na EMUI 10 beta A ga-ewepụta ya na Septemba 8. Maka oge a, onye nrụpụta ahapụlarị anyị igwe izizi nke ga-adaba na ya. Ọ bụ ezie na ihe dị mma bụ na ndepụta ahụ sara mbara karị, mana ọ dị ka ndị a bụ ngwaọrụ ga-enweta beta a na mbụ. Agbanyeghị, anyị na-eche maka akụkọ ndị ọzọ.
Ekwentị ndị ga-abanye EMUI 10 beta na Septemba ha bụ: Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Huawei Mate 20 Porsche Design, Huawei Mate 20 X, Huawei P30, Huawei P30 Pro, Huawei P30 Lite, Honor V20 na Honor Magic 2. N'oge a ha bụ naanị ndị nke ndị na-emepụta China kwenyesiri ike, mana n'ezie izu ndị a ma ọ bụ mgbe mmalite nke beta mbụ, a ga-amatakwu banyere ekwentị ndị ọzọ, ma Huawei na Honor, nke nwere ike ịnweta ya. Enweghị ụbọchị maka ntọhapụ nke nsụgharị anụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Ngwa gam akporo » Mobiles » Huawei » EMUI 10 bụ ọkwa gọọmentị: Mara ozi ya niile